ရုရှားက အင်စတာဂရမ် နာမည်ကျော် အီကာတရီးနား ကာရာဂလာန...
30 ก.ค. 2562 - 22:54 น.
၂၄ နှစ် အရွယ် အီကာတရီးနား ကာရာဂလာနိုဗာ သူတို့နဲ့ အဆက်အသွယ်မလုပ်တာ ရက်တွေနဲ့ချီ ရှိနေတာကို သတိထားမိတဲ့ သူ့မိဘတွေက သောကြာနေ့ကမှ သူ့အလောင်းကို တွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ခရီးမထွက်ခင်ရက်ပိုင်းမှာ သမီးနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာ မရဖြစ်နေတဲ့ မိဘတွေက စိတ်ပူလာခဲ့ကြပြီး သမီးအခန်းပိုင်ရှင်ကို အခန်းထဲ ဝင်ကြည့်ခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီမှာ အခန်းကူးတဲ့ လမ်းကြားထဲ သမီးအလောင်းထည့်ထားတဲ့ ခရီးဆောင် သေတ္တာကို တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ ဖခင်ဖြစ်သူက လူနာတင်ကားခေါ်ခဲ့ပေမယ့် ကာရာဂလာနိုဗာဟာ လည်ပင်းလှီးခံရတဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူ့တိုက်ခန်းထဲမှာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ထားတဲ့ သက်သေအထောက်အထား မတွေ့ရဘူးလို့လည်း ရဲက ဆိုပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာ လက်နက်ရယ်လို့လည်း မတွေ့ရဘူးလို့ MK ဆိုတဲ့ ရုရှားသတင်းစာက ရေးပါတယ်။
ဒီအမျိုးသမီး ပျောက်သွားတဲ့ ရက်ပိုင်းလောက်က သူ့ရည်းစားဟောင်း အမျိုးသားတယောက် သူ့အခန်းကို ခဏလာတဲ့ပုံရိပ်တွေကို စီစီတီဗီရုပ်သံကနေ ဖမ်းယူမိခဲ့တာကိုလည်း ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ဆက်ပြီး စုံစမ်းတယ်လို့တော့ မသိရပါဘူး။
မတ်လက သူတင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်တခုမှာတော့ သူ့တိုက်ခန်းကို ပြန်ပြီး မွမ်းမံမယ့်အကြောင်း၊ နိုင်ငံခြား ခရီးတွေ သွားမယ့်အကြောင်း ရေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ အခုမပြောသေးတဲ့ အရေးကြီးကိစ္စတခု စဉ်းစားနေတာ ရှိတယ်လို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရုရှားက အင်စတာဂရမ် နာမည်ကျော် အီကာတရီးနား ကာရာဂလာနိုဗာအလောင်းကို ခရီးဆောင်အိတ်ထဲတွေ့